Mursal Ciise oo markale loo doortay golaha sare ee xisbiga Miljöpartiet | Somaliska
Mursal Cise ayaa dhamaadkii isbuucii tagay markale loo doortay in uu ka sii mid ahaado goloha sare (partistyrelsen) ee xisbiga Miljöpartiet (MP). Mursal oo sanadkii hore noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee ka mid noqda golaha sare ee xisbiyada Sweden ayaa wargeyska Dalarna Tidningen u sheegay in uu aad ugu farxay in markale la doortay.
“Waxaan ka mid ahaa xubnihii ay soo jeediyeen gudiga doorashada balse waxaa la qabtay codeyn oo dad badan aya tartan galay, waa la i doortay oo aad ayaan ugu farxay taageerada aan helay” ayuu wargeyska u sheegay Mursal
Mursal ayaa helay 172 cod isagoo ahaa qofka labaad ee helay codadka ugu badan marka laga reebo wasiirka dhaqanka Alice Bah Kunke oo heshay 209 cod. Mursal ayaa sheegay in kulanka xisbigu uu yeeshay uu ahaa mid loo baahnaa oo horumar ah.
Xisbiga Miljöpartiet ayaa waxaa la soo daristay fadeexad weyn ka dib markii cadaadis la saaray wasiirka guryaha Mehmet Kaplan oo lagu qasbay in uu iscasilo. Waxaa sidoo kale fadeexad lagu furay Yasri Khan oo la filayay in loo doorto in uu ka mid noqdo goloha sare ee xisbiga isagoo guud ahaan isaga baxay xisbiga.
Arimahaas ayaa keenay in dadka Muslimiinta neceb ay xisbiga ku eedeeyeen mid ay qabsadeen Islaamiyiin. Halka Muslimiintu ay dareemeen in xisbigaan uu noqday mid aysan taageero ka helin.
Waxaa sidoo kale iscasishay wasiirka deegaanka Åsa Romson oo ahayd afhayeenka labaad ee xisbiga.
Masha Allah! Mursal Hambalyo aad ayaan ugu faraxsanahay insåg xubin ka noqoto Allah ha kula garab galo insha Allah 😊😀👐👍👏❤👌🌷🎁👑
masha allah mursal alle hakula garab galo dadaal walal